Samsung Galaxy Note 7 nwere ike ịchekwa ugbu a na ọnụahịa nke 859 euro | Akụkọ akụrụngwa
Samsung Galaxy Note 7 nwere ike idobe ya ugbu a na ọnụahịa nke euro 859
El Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. ọ na-anọgide na-abụ isi ihe ọkpụkpọ na ahịa ekwentị, mgbe emechara ya n'ihu ụbọchị ole na ole gara aga. Ma ọ bụ na ọ bụrụ na ụnyaahụ ụlọ ọrụ South Korea gwara anyị na vidiyo uru nke S Pen ọhụrụ ahụ ma karịa ihe niile echetara anyị na anyị ekwesịghị itinye ya azụ, iji zere oke iwe, taa anyị tetara na akụkọ ọ bụ enwere ike iwe akwụkwọ ọnụ na Europe.
Site taa, onye ọrụ ọ bụla bi na Europe nwere ike ịme ndoputa ma ọ bụ zụta tupu ịzụta nke ọhụrụ Galaxy Note 7. pricegwọ ya, dị ka anyị na-atụ anya, ọ dịghị ebelata ma ọ bụ na ọ gbagburu euro 859, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị mee ndoputa tupu August 31 ị ga-enweta Samsung Gear VR dị ka onyinye .
Dị ka anyị na-ama mara lA ga-amalite ịnata iwu na Septemba 2, otu ụbọchị ọ ga - abata na ahịa, anyị nwere ike ịzụta ya na ụlọ ahịa anụ ahụ na nke mebere, nwere otu ọnụahịa, ọ bụ ezie na enweghị onyinye ọzọ.
Enwere ike ịdebe ebe a site na webụsaịtị Samsung, ọ bụ ezie na anyị nwekwara ike ịzụta ya, ma n'ụdị ndoputa yana site na Septemba 2 na-esote n'ụlọ ahịa dịka El Corte Ingles, MediaMarkt, Carrefour, Telecor, Fnac, Worten, PromoCaixa , Vodafone na oroma.
Na-atụle ohere ị nwere inweta Samsung Galaxy Note 7 ọhụrụ?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na otu netwọkụ ndi anyi nọ n’ime ya ma gwakwa anyi ihe ichere maka ọnụego Samsung edobere maka ọkwa ọhụrụ ya.
Isi mmalite - samsung.com
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Samsung Galaxy Note 7 nwere ike idobe ya ugbu a na ọnụahịa nke euro 859
Duoskin, egbugbu smart mbụ nke Microsoft
Ọ dịghị mmadụ si Sky infuriates PC ọrụ maka ya ogbenye njikarịcha